मेरो हात कम चल्छ - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	मेरो हात कम चल्छ
8th October 2020 8th October 2020 67 views
हात र चल्नु, यी दुबै नेपाली भाषाका शब्दहरु हुन् । एउटा नाम र अर्काे क्रिया । एक्ला–एक्लै राख्दा यी दुवै शब्दको आ– आफ्नै अर्थ छ । अर्थात भिन्नता पनि छ । यी दुवै शब्दलाई एक आपसमा जोड्दा हात चल्नु भन्ने वाक्याँश बन्दछ । जसको अर्थ यी दुवै शब्दले एक्ला एक्लै हँुदा दिने अर्थ भन्दा अवश्य पनि भिन्न छ । हात चल्नु भन्ने वाक्याँशलाई नेपाली शब्दकोषमा ठ्याक्कै कसरी अर्थ लगाइएको छ, त्यतातिर नजाउँ होला । तर समान्य बोलीचालीको भाषामा हात चल्नु भन्ने वाक्याँलाई दुइ तरिकाले प्रयोग गर्ने गरिएको पाईन्छ । एउटा जाँगरिलो हुुनु र अर्काे धेरै झै–झगडा गर्नु । अलिक प्रष्ट रुपमा भन्दा यदि कोही मान्छे जाँगरिलो छ, काम गरिराख्छ भने यस्को त कस्तो मज्जाले हात चल्छ भन्ने
गरीन्छ । त्यस्तै कोही मान्छे अल्छी छ, काम गर्दा ठगठाग गर्ने प्रवृत्तिको छ भने हातसात चलाउनु छैन मुख मात्रै बजाएर हुन्छ भन्ने भावमा पनि यो वाक्याँश प्रयोग गरिन्छ । अर्काे चाहिँ यदि कोही मान्छे छिट्टो रिसाउँछ र रिस उठेपछि बोलेर कुरा मिलाउन भन्दा पनि पिटपाट र झै–भगडामा उत्रिहाल्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि फलानाको हात छिटो चल्ने बानी नराम्रो भन्ने हिसाबले यो वाक्याँशको प्रयोग गर्ने गरिएको पाईन्छ ।
भूगोल, समाज, संस्कृति, रहनसहनको हिसाबले हात चल्नुको ठाउँ र समय अनुसार फरक फरक अर्थ पनि लाग्ला तर पङ्तििकारले आफ्नो समाज र परिवेशमा हात चल्नुलाई अधिकांशतः उपर्युक्त दुइ खाले भाव आउने गरेरै प्रयोग गरेको पाएकोले यत्तिमै सीमित रहन चाहँे । अल्पज्ञानको लागि क्षमा चाहन्छु । हात चल्नुको अर्थलाई माथि प्रस्तुत गरिएको दुइवटा दृष्टिकोणबाट मात्र नियाल्ने हो भने मैले खुसी पनि हुनुपर्छ र दुःखी पनि । खुसी यस अर्थमा कि झै–झगडा गर्ने हिसाबमा मेरो हात चल्दैन । कमसेकम आजसम्म चलेको छैन । सानो छँदा हात चलेर अहिले भुलेको भए अलग कुरा, होइन भने मेरो हात चलेको मलाई त्यति साह्रो याद छैन । अनि दुःखी चाहिँ यस अर्थमा कि जाँगर र काम गर्ने हिसाबमा पनि मेरो हात कम चल्छ । मेरो खाँटटी पीडा चाहिँ के भने झै– झगडा गर्न हात नचलेकोमा खुसी भन्दापनि काम गर्न हात नचलेकोमा दुःख धेरै लाग्न थालेको छ । उफ ! किन मेरो हात कम चल्छ ?
मान्छेले जन्मेपछि हात नचलाई सुखै छैन । हरेक दिन हरेक मान्छेले हात चलाईरहेकै हुन्छ । कोही आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न हात चलाई रहेका छन्, कोही थप्न÷थुपार्नको लागि हात चलाईरहेका छन् । कोही आफ्नो र आफ्नाहरुका लागि हात चलाईरहेका छन् । कोही कोही भने अरुको लागि हात चलाई दिने पनि छन् । आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो राष्ट्रको लागि । तर त्यस्ता मान्छेहरु अति नै कम छन् । जे होस् सबैले हात चलाईरहेका छन्, फरक यत्ति हो उनीहरुले हात चलाउने क्षेत्र फरक छ । हात चाहिँ चलेकै छ है । कस्तो बिडम्बना भने आफैले कमाउनको लागि त हात नचलाई हुँदै भएन अरुले हात चलाएर कमाइ दिएको खाना थालबाट मुखसम्म पु¥याउन पनि हात नचलाई नहुने । धेरै कुरा नबुझे पनि यत्ति चाहिँ बुझे जस्तो लाग्छ, जीवनमा बाँच्नकै लागि दुइछाक खान मात्र पनि हात नचलाई सुख छैन । दुःखको कुरा चाहिँ यत्ति बुझ्दा बुझ्दै पनि मेरो हात कम चल्छ । उफ् !
अहिलेको समय प्रतिस्पर्धाको समय हो । यहाँ हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धा छ । खाने कुरामा प्रतिस्पर्धा छ, लगाउने कुरामा प्रतिस्पर्धा छ । पढाईमा प्रतिस्पर्धा छ, व्यापार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा छ, रोजगारीमा प्रतिस्पर्धा छ, राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा छ, हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धा छ ।
अरु त अरु समाजसेवामा, राष्ट्र सेवामा त प्रतिस्पर्धा छ यहाँ । तर समाजसेवामा हुने प्रतिस्पर्धा चाहिँ अरुलाई देखाउनको लागि मात्र हो है । बाँकी चाहिँ आफ्नै लागि । मैले भन्न खोजेको चाहिँ , के के मा प्रतिस्पर्धा छ, कहाँ कहाँ प्रतिस्पर्धा छ भन्दा पनि आजको समयमा आफ्नो अस्तित्वको रक्षाकै लागि मात्र पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रनु पर्ने अवस्था छ । प्रतिस्पर्धाको यो ठेलमठेलमा अरु भन्दा अलग हुन, अरुभन्दा अगाडि हुन त हात चलाउनुको अर्काे विकल्प नै छैन । आत कहाँ चलाउने र कसरी चलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ विचार पु¥याउनु पर्छ । हेर्नुस् त मलाई यो कुरा पनि थाहा रैछ तर अफसोच थाहा हुँदा हुँदैपनि मेरो हात कम चल्छ । उफ !
कहिलेकाहिँ मलाई आफ्नै देश देखेर रीस पनि उठ्छ । यहाँको चालचलन, रीतिथिती, संस्कृति, नियम, कानुन, पद्धति सबैसंग रीस उठ्छ । मेरो हात कम चल्नुमा यी सबै कुराको दोष छ कि जस्तो लाग्छ । लाग्छ हैन मेरो हात कम चल्नुमा यी सबैको हात छ, यी सबैको दोष छ । लौ जा आफ्नै देशलाई दोष लागाइ दिएँ जे त होला होला । दोषपनि किन नलागाउनु छ ? यसो विचार गरौं त विदेशमा १८ घण्टा चल्ने नेपालीको हात नेपालमा ८ घण्टा पनि चल्दैन । विदेशमा १० औं वर्ष लागाएर दैनिक १८ घण्टा हात चलाउन लागाएको बानी नेपाल आएको १० दिनमै ८ घण्टा तिर झर्छ ।
विदेशले त्यत्रो सम्झाई बुझाइ गरेर हात चाहिँ चलाउनु पर्छ है, जति सकिन्छ चलाउनु पर्छ भनेर सिकाएर पठाएको कुरा त नेपाल आउना साथ भुल्छन् मान्छेहरु । आफुले त विदेशको नाममा यहिँ परको इण्डिया पनि देख्या छैन । अनि कसरी धेरै चलोस् त मेरो हात । अब तपाईं नै भन्नोस्, मैले देशलाई दोष लगाएर केही विराएँ त ? ओहो मैले कति सजिलै देशलाई दोष लगाईदिएँ है ! जति सजिलै दोष लाएँ, त्यति सजिलै मेरो हातपनि चल्देको भए शायद मैले कसैलाई पनि दोष लाउनु पर्थेन होला । हे भगवान् लौन केही गरिदेउ मेरो हात कम चल्यो ।
मेरो पनि सपना छ । चाहना छ । इच्छा छ । अरु भन्दा अब्बल हुने । अरु भन्दा अगाडि हुने । अरुले भन्दा प्रगति गर्ने । जीवनमा टन्न दाम कमाउने । समाजमा गतिलो नाम कमाउने । तर सपना भएर मात्र नहुने रहेछ । सपना त छ नि तर सपना भएर मात्र के गर्नु आफ्नो हातै कम चल्छ । धेत्तेरिका कस्तो हात परेछ । यस्तो कुरा बुझ्ने मान्छेलाई त भगवानले हात पनि अलि गतिलो दिनु नि । मेरो हात कम चल्नुमा भगवानको पो षडयन्त्र छ कि क्या हो ? हात जति नै कम चलेपनि म आफुलाई अल्छी चाहिँ मान्दिन है , हात नचल्दैमा मान्छे अल्छि हुन्छ र ? हात नचलाए नि मैले मुख त चलाएकै छु त । कम्ति मुख चलाएको छु मैले । कुन क्षेत्रमा मुख चलाइन भन्नु न । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, विकास निर्माणसबै क्षेत्रमा मुख चलाएको छु । परिआए देश कसरी चलाउने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सिकाइदिन सक्छु । त्यस्तो खत्रा चल्छ मेरो मुख । बरु एउटा सरसल्लाह मन्त्रालय गठन गरी मलाई प्रमुख बनाईदिए पनि हुने । मुख मात्र हैन दिमाग पनि चलाउँछु । दैनिक ३, ४ घण्टा त म सोचेरै विताइदिन सक्छु । सोच्ने पनि लरतरो कुरा हो र ? कसरी उन्नति गर्ने ? कसरी प्रगति गर्ने ? कसरी पैसो कमाउने ? फलानो जस्तो कसरी बन्ने ? ढिस्कानाले जस्तै काम कसरी गर्ने ? यो अल्छी अनि सकेसम्म चल्न नपरोस् भन्ने हातलाई कसरी चलायमान बनाउने ? हेर्नुस् त कती गम्भीर विषय ! कति ठूलो सोचाई ? यति गम्भीर विचार विमर्श गर्ने, यति ठूलो सोचाई राख्ने मान्छेलाई अल्छी भन्न मिल्छ त ? फिटिक्कै मिल्दैन नि । त्यही भएर म आफैलाई अल्छि छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन के । मेरो मुख चल्छ । बेतोड चल्छ । धाराप्रवाह चल्छ । दिमाग चल्छ । मज्जैले चल्छ ।
त्यस्तै परे सोचेर योजनै मात्र बनाएर दिन बिताई दिन सक्छु । मन चल्छ । देख्नलाई इण्डिया देख्या छैन तर मन उडाएर अमेरिका पु¥याईदिन सक्छु । मेरो सप्पै कुरा चल्छ, राम्रोसंग चल्छ । अलि कम चल्ने भन्या यहि नाथे हात त हो नी । कहिले काहिँ सोच्दा सोच्दै हैरान हुन्छु । सब कुरा चाहिने भन्दा बढी चल्छ । मुख चाहिने भन्दा बढी चल्छ, दिमाग चाहिने भन्दा बढी चल्छ । मन त झन मनै भै हाल्यो । सब कुरा बढी चल्छ खाली यो हात किन कम चल्छ ?